CashCow - Android Apps on Google Play
Translate the description into English using Google Translate? Translate the description back to Burmese
Have you ever looked at an advertisement and thought that you should be paid for your time and effort?
Well, now you've got it withanew Android app from Myanmar: CASHCOW.
CASHCOW providesamobile advertising service which turns your lock screen intoabillboard for incentivized ads. We will be sharing the advertising revenue with you by rewarding you 100 CASHCOW Points everyday for using our app.
And if you get your friends to sign up, you will earn extra 100 points per person. Earned points can be exchanged with mobile top-up, allowing you to enjoy more data with your smartphone!
What are you waiting for? Join the bandwagon and download now!
Don't forget to share your feedback as we are excited to hear your valuable thoughts for better service!
Do not forget to share your feedback as we are excited to hear your valuable thoughts for better service!
karen saw chit
ဖုန်း​ဘေးမရ​တော့ဘူးလား ထုတ်​ဖို့လည်းဘာတစ်​မှမ​တေ့​တော ဘူး
Think it's so unral but it is real that this app can make and send messages from your phone no thanks
Kyaw Myo Thant Boggercell
I can't read post by swiping left... and I can't go back home by swiping right ... no post no point just useless
Can't get the verification for my phone number. Keeps saying that I'm not adding enough numbers. Is it not available for united states??
karen saw chit February 11, 2018
saung lay December 23, 2017
Mya Yar January 10, 2018
Claire-Louise Pitman November 26, 2017
Kyaw Myo Thant Boggercell June 19, 2017
Cashcow November 7, 2017
Thank you for installing Cashcow. Our lock-screen service is not supported in mi phone.We will fix it as soon as possible.I hope you can make full use of our application.If you have any other question, you can ask in https://www.facebook.com/cashcowmyanmar page.Haveanice day.
Jeannie Dmitruk June 14, 2017
I am so sorry for this.This application can be used in Myanmar only with Myanmar phone number.Thanks for interesting in Cashcow.
Cashcow Application ကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။လိုအပ်ချက်များရှိလျှင် https://www.facebook.com/cashcowmyanmar မှာ message ပို့ပေး၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
William Smith May 15, 2017
point 30 ပဲဆက်ပေးနေရင် user ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး
ဘယ်ဘက်ကိုပွတ်ဆွဲရတဲ့ ပွိုင့်တွေကို တိုးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Cashcow Application ကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။လိုအပ်ချက်များရှိလျှင် https://www.facebook.com/cashcowmyanmar မှာ message ပို့ပေး၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
yu war October 9, 2017
ဘေကမတင်တော့ဘူးလား ပြောတော့တစ်ပက်သုံးခါ တင်ပေးတယ်တဲ့ ဘရမ်းဘဒါတွေလျောက်ပြောနေတာ နေ့တိုင်းစောင့်နေတာ ဘယ်နားသွားတင်တာလဲ ပြောပါဦး
phyo lay April 12, 2017
Daily က တစ်​​နေ့၃၀ပဲ ရ​တော့တာလား ဟုတ်​လား ဘယ်​လိုဖစ်​တာလဲ
ဘယ်ဘက်ပွတ်ဆွဲတဲ့ point တွေကို တိုးပေးသွားမှာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အသေးစိတ်ကို https://www.facebook.com/cashcowmyanmar မှာ message ပို့ပေး၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Cashcow Application ကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
chit thu June 5, 2017
ဘာလဲဗျာ pwပြန်တောင်းဝင်တာ ဝင်မရဘူး ဒါသဘောလဲဗျာ လိုင်းမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောနေတယ်
La Min Lay August 20, 2017
မိမိကို ဖိတ်ခေါ်သူရဲ့ ID ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Cashcow Application ကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။လိုအပ်ချက်များရှိလျှင် https://www.facebook.com/cashcowmyanmar မှာ message ပို့ပေး၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Chit Oo July 2, 2017
အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျ သုံးတတ်ရင်သိန်းနဲ့ချီရပါတယ် စစဝင်၃ကညွှန်းဆိုသူနေရာမာDealthyPဆိုတဲ့စာလေးရိုက်ဝင်ရင် နေ့စဉ်refreshလုပ်ရင်၁၀၀pointရပါတယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ခေါ်တိုင်း၁၀၀pointထပ်တိုးပေးပါတယ်
Sai Tai March 31, 2017
အခု ၃၀ ပဲရ​တော့တာလားငယ်​ချင်းတို့​ရေ​ပြေား​ပေးကြပါအုံး
ဘယ်ဘက်ကိုပွတ်ဆွဲရတဲ့ ပွိုင်တွေ့တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Cashcow Application ကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။လိုအပ်ချက်များရှိလျှင် https://www.facebook.com/cashcowmyanmar မှာ message ပို့ပေး၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
You must not play the users.Daily 100 pts should be given everydays.
အဆင်မပြေလို့လားခင်ဗျာ။ Daily pt 30 က နေ့လည် ၁၂ မကျော်ခင် refresh လုပ်ပေးရင် ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Cashcow Application ကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။ လိုအပ်ချက်များရှိလျှင် https://www.facebook.com/cashcowmyanmar မှာ message ပို့ပေး၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
kaungsu thar May 4, 2017
၁၂ နာရီ မတိုင်ခင် refresh လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Cashcow Application ကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။လိုအပ်ချက်များရှိလျှင် https://www.facebook.com/cashcowmyanmar မှာ message ပို့ပေး၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
tun tun shwe May 17, 2017
သတင်းဖတ်​လျက်​နဲ့ ​ရွှေပြားကတိုးမလာဘူး ID က​တော့ tuntunshwe ပါ
စစ်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ Cashcow Application ကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။လိုအပ်ချက်များရှိလျှင် https://www.facebook.com/cashcowmyanmar မှာ message ပို့ပေး၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Min Htet May 25, 2017
အသုံးပြုနည်း (၃)မျိုး ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အသေးစိတ်ကို https://www.facebook.com/cashcowmyanmar မှာ message ပို့ပေး၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Cashcow Application ကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
Han Min Htut March 6, 2017
1000 တန် ငွေဖြည့်ကဒ်ထည့်ပေးပါ့လားဗျ
အကြံပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Cashcow Application ကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။လိုအပ်ချက်များရှိလျှင် https://www.facebook.com/cashcowmyanmar မှာ message ပို့ပေး၍လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
HE DO ZIN LUCKY August 3, 2017
CB 3300 ရပြီး ​ဘေchange လို့မရဘူး
phyo phyo May 16, 2017
Chit San June 5, 2017
Wai Yan May 20, 2017
Minn Kyaw March 31, 2017
Thank you for installing Cashcow. I hope you can make full use of our application.If you have any other question, you can ask in Cashcow Myanmar Page ( https://www.facebook.com/cashcowmyanmar ).Haveanice day.
Wanted Joker April 27, 2017
ှုIs there any problem using Cashcow.If you have any other question, you can ask in Cashcow Myanmar Facebook Page ( https://www.facebook.com/cashcowmyanmar ). Thank you for installing Cashcow. I hope you can make full use of our application.Haveanice day.
YinNint Phan March 8, 2017
yoonaein phyu486 March 6, 2017
Mr Pyae Phyo Oo October 26, 2017
lulue lu April 7, 2017
Linn mgmg April 15, 2017
Aung Chan Myae November 21, 2017
qwer qwer August 15, 2017
thu rein April 10, 2017
Is there any problem using Cashcow? .If you have any other question, you can ask in Cashcow Myanmar Facebook Page ( https://www.facebook.com/cashcowmyanmar ).Thank you for installing Cashcow. I hope you can make full use of our applicationHaveanice day.
chit soone March 7, 2017
Myat Thu July 4, 2017
Thank you for installing Cashcow. I hope you can make full use of our application.If you have any question, you can ask in https://www.facebook.com/cashcowmyanmar page.Haveanice day.
Thae Thae March 25, 2017
Thank you for installing Cashcow. I hope you can make full use of our application.If you have any question, you can ask in Cashcow Myanmar Page ( https://www.facebook.com/cashcowmyanmar ).Haveanice day.